Izinto eziyiliweyo zoyilo lwegraphic kwikholeji | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukufika kwakho eyunivesithi, kubalulekile ukuba uqonde iingxaki ezingaphandle kwendawo yentuthuzelo yomyili ngamnye kwaye ngelishwa, iyunivesithi soze ifundise indlela yokujongana nabathengiAbaphathi, abaphuhlisi kunye nasiphi na esinye isikhundla esijikeleza kwihlabathi liphela labayili, abasoloko bexoxa rhoqo nabo.
Ngokufanayo, qonda abantu kunye nezizathu ukuba ngamnye kubo unazo kwaye, hayi ukuthatha izinto ngokungathí sina kwaye ngokungathandabuzekiyo, kodwa endaweni yokuba anyanzelise kancinci kwaye azame ukubona yonke into ngokwembono yabanye, kunokuba izakhono ezibalulekileyo ukuba umyili kufuneka afunde kwikholeji, kodwa kuninzi okungakumbi.
1 Funda ukufunda
2 Funda ukwenza kwakhona
3 Yiba nomhlohli
Ingavakala ngathi iyothusa nangona kunjalo, kungakulunga ukuba abayili banokufunda ukufunda kwikholejiukuze bakwazi ukulungela ukufumana amava aphelelwe lixesha ngaphandle kokuhlala kwinqanaba labo lolwazi, kuba kuhlala kukho into entsha abanokuyifunda.
Funda ukwenza kwakhona
Akukho projekthi zilungele ngokupheleleyo; kunokwenzeka ukuba wenze kwakhona yonke into kwaye uyigqibelele.
Nangona kunjalo, kuxhomekeke kuyilo ngalunye ukuba lubonakalise ubudlelwane Ixabiso-Isibonelelo eya kufumaneka kumzamo oqhubekayo wokuvala imisebenzi eqhubeka neprojekthi elandelayo kwaye yinto abangayifundisiyo kwikholeji Kwaye kuya kuba kuhle ukufunda, kuba ngokucacileyo kuya kuba luncedo kakhulu ukufunda ukuba iiprojekthi zinokuphuculwa ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, ukufezekisa ulungelelwaniso olungcono lwezinto.
Incopho yeprojekthi ibalulekile kwaye ukuphuculwa kwayo kuya kuqinisekisa ukuba umyili uyakuphumelela na okanye uza kusilela.
Fumana iingcebiso kunye funda kumntu onamava Ngelixa usekholejini, inokwenza umyili aguquke ngokukhawuleza okukhulu. Umqeqeshi akufuneki abe noqeqesho olufanayo nomyili, kufuneka azi kuphela into umntu afuna ukuyifunda.
Yiba nomhlohli ihlala iyenye indlela ebalaseleyo ukuba seyunivesithi, njengoko ikuvumela ukuba ufumane ulwazi, oluya kukunceda ukuba ungangqubani nemiceli mngeni efanayo kunye nemiceli mngeni kuye kwanyanzeleka ukuba umhlohli angene kuyo, ukuze ugcine amandla, ixesha kunye nemali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Izinto eziyilwe ngumzobi kufuneka zikholeji